Saddex abaalmarin oo cusub Ted Lasso | Waxaan ka socdaa mac
Taxanaha ugu guulaha badan taariikhda gaaban ee Apple TV + waa Ted Lasso, oo ah taxane majaajilo ah oo kasbanaya magacaabis kasta oo ay hesho. Abaalmarinnadii ugu dambeeyay ee taxanaha Jason Sudeikis ee jilayaashu waxay ka yimaadeen Qorayaasha Guild of America.
Qorayaasha Guild of America (WGA) waxay u sharfeen Ted Lasso inuu yahay Taxanaha Cusub ee ugu Fiican iyo Taxanaha Ugu Qosolka Badan, sidaasna ay ku guuleysteen abaalmarinta qeybaha ugu muhiimsan. Laakiin intaa waxaa sii dheer, Jason Sudeikis ayaa sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta jilaaga ugu qosolka badan. Sidan oo kale, Ted Lasso wuxuu ku guuleystay saddexda qaybood ee loo magacaabay.
Abaalmarintaan waxaa lagu daraa kuwii horey loogu soo qaatay taxanaha Golden Globes iyo Abaalmarinta Dhaleeceynta, iyo kuwa kale. Abaalmarinta soo socota ee taxanahan sidoo kale loo magacaabay, Guild Actors Guild, ayaa la qaban doonaa Abriil 5.
Ted Lasso wuxuu yimid Apple TV + wax dhib ah maleh. Si kastaba ha noqotee, waxay si dhakhso leh u noqotay mid ka mid ah hits-ka ugu weyn ee laga heli karo barnaamijka fiidiyoowga ah ee Apple, oo ay ka helaan dadweynaha iyo saxaafadda ganacsiga.
Midka saddexaad wuxuu noqon doonaa xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay
Dhowr usbuuc ka hor, duubitaankii qeybtii labaad ee taxanahan ayaa bilaabmay, xilli labaad oo ay ku xigi doonaan saddexaad oo markan ay noqon doonto kii ugu dambeeyay, sida uu sheegay abuuraha silsiladda toddobaadyo ka hor.
Waqtigaan la joogo, Ted Lasso wuxuu noqday taxanaha ugu guusha badan ee laga heli karo Apple TV, taxane ku dhashay sii wadida xayeysiinta NBC u sameysay si kor loogu qaado heshiiska baahinta ee shabakadan Mareykanku ku guuleysatay inay ka baahiso Premier League Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Saddex abaalmarin oo cusub Ted Lasso
App Reflector waa la cusbooneysiiyay si uu ula jaan qaado processor-yada Big Sur iyo M1